Wafdigii Dawladda Somalia ee joojinta Colaada Mudug (miyiga Gaalkacayo) oo ku guulaystay Heshiis xabad joojin labadii Beelood iyo Qodabada Heshiiska. | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > Galmudug, PUNTLAND, SOMALI NEWS, TFG Somalia, WARARKA	> Wafdigii Dawladda Somalia ee joojinta Colaada Mudug (miyiga Gaalkacayo) oo ku guulaystay Heshiis xabad joojin labadii Beelood iyo Qodabada Heshiiska.
Saturday, December 11, 2010 Laaska News
Galkacayo– Waxaa Maalmahan ku sugnaa magaalo madaxda Gobolka Mudug ee Gaalkacyo,Wafdi heer sare ah oo Dawladda Federaalka Soomaaliyeed ah.
Wafdigan ayaa ah Guddi uu dhawaan magacaabay Raysal Wasaaraha Soomaaliya Dr.Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si ay u joojiyaan colaad dhexmartay laba Beelood oo ah deegaanka Mudug.
Wafdigan ayaa Waxaa hogaaminayay Raysal Wasaare kuxigeenka Soomaaliya ahna Wasiirka Qorshaha iyo Xiriirka Caalamiga Prof. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas,waxaa kamid ah Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Amniga ee Dawladda Federaalka Somaliya Cabdishakuur Sh.Xasan Faarax,Wasiir kuxigeen iyo Xildhibaano.
Wafdigan ka socda Dawladda Soomaaliya ayaa noqonaya wafdigii ugu horeeyay ee Gobolada ku yimaada,tan iyo intii la dhisay Dawladda uu Raysal Wasaare Farmaajo uu madaxda ka yahay.
Colaadan labada Beelood ee mudug ,ayaa la sheegay inay ka bilaabantay dadka reer guuraa ah oo xoolo dhaqato ah,taasoo salka ku hayso ama la xiriirta Daaqsinta iyo Biyaaha,kadibna soo gaaray daafaha magaalada Gaalkacayo oo ay labada Beelood wada deganyihiin, kana kala tirsan yihiin Maamulada Puntland iyo Galmudug amaba Waqooyiga iyo Koonfurta Gaalkacayo.
Labadan Maamul ayaa horay xiriir fiican ulahaa,taasoo ay ku guulaysteen in magaalada Gaalkacayo nabad loogu wada noolaado iyadoo lagu kala duwan yahay maamulka,qolo walibana leedahay maamulkeeda gaarka ah,waxaana taa la oran karaa waa arrin muujinaysa inay yihiin dad bisil oo gartay waxa ay tahay Colaadda iyo nabaddu marka loo eego Dawlad la’aantii dalku soo martay.
Dagaalkan labada beelood ayaa waxaa uu sababay dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray labada Beelood oo ah dad deegaan wadaag ah,iyo is eedeyn iyo is tuhmid dhexmara labada Maamul ee Gaalkacayo kawada jira.
Colaadaa Miyiga ka bilaabantay ayaa saamayn ku yeelatay Gudaha Gaalkacayo,waana arrinta keentay inay soo baxaan Baaqyo iyo Qayla dhaan ay jeedinayaan waxgaradka Soomaaliyeed in la joojiyo Colaadaa.
Waxaa kaloo xusid mudan in wafdigaDawladda Federaalka Dawladda ee dajinta colaadan u xilsaarani inay ka soo jeedaan labada Beelood ee la gu hawlan yahay in heshiis la kala dhex dhigo.
Wafdigan ayaa ilaa iyo markii ay yimaadeen magaalada Gaalkacayo waxay wadeen kulamo Gooni gooni ah oo ay la yeelanayeen masuuliyiinta, odayaasha, waxgaradka, maamulka Gaalkacayo iyo Gobolkaba.
Waxay kaloo kulamo la qaateen Madaxda Galmudug iyo Madax sare oo wasiiro iyo saraakiil kale oo ka tirsan Dawlad Goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland,iyagoo dhamaantood kala hadlay dajinta xiisadda , joojinta colaadda iyo dhiigga daadanaya ee labada Beelood ee walaalaha ah, sidii loogu dhawaaqi lahaa xabad joojin dagdag ah.
Kulamadaas waxaa garab socday kulamo kale iyo wafdi kale oo ka yimid Muqdisho oo Odayaal iyo Waxgarad kale ah oo u hogaaminayo Genaral Cabdi Qaybdiid oo iyaguna dhinacooda kawada daminta Colaadda.
Prof. Cabdi wali oo warbaahinta la hadlay shalay ayaa rajo fiican ka muujiyay nabadaynta iyo in xal laga gaaro colaadda labada Beelood, sheegayna in saacadaha soo socda uu ku raja weyn yahay in nabad lakala dhex dhigo labada Beelood.
Haddaba Maanta ayaa wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Amniga ee Dawladda Federaalka Soomaaliyeed Mr.Cabdishakuur Sh. Xasan Faarax uu BBC da usheegay in Heshiis Xabad joojin ah laga gaaray colaaddii iyo dirirtii u dhaxaysay labada beelood ee Mudug.
Qodabada Heshiiskaa lagu gaaray ee ay labada Beelood ku heshiiyeena ay kamid yihiin:
1.Xabad joojin in la sameeyo,kana bilaabanaysa maanta,waana ku dhawaaqeen labada Beelood.
2.In lakala qaado Ciidamada is hor fadhiya.
3.Haddii ay suura gal tahay in biyaha lawada cabo,maadaama lagu jiro xaalad abaaro iyo biyo yaraan ah.
Mr.cabdishakuur ayaa raaciyay nabadaynta inta ka harsan ay Cuqaasha iyo odayaasha dhaqanka ay dhameynayaan.
Mr.Cabdishakuur ayaa sheegay inay aamisan yihiin inay xabad joojinta iyo nabadayntaa ay hirgalayso,waxayna labada beelood ka balan qaadeen hortayada.
Wasiirka A.Gudaha Mr. Cabdi shakuur oo ka hadlay Maamulada ayaa xusay inay labada maamul ee Puntland iyo Galmudug kaalin wanaagsan kaqaateen heshiiskan ay labada Beelood gaareen maanta.
Baliga Ceegaag oo lagu bilaabay Qodid Dibuhabayn ah Shirkadda tababaraysa Ciidanka Badda ee Puntland oo ka warbixisay Diyaaradda lagu Qabtay Hargeysa iyo waxa u saaran iyo Meesha ay ka timid………..